Fampandrosoana ifotony: Indostria isam-paritra manodina ny vokatry ny fambolena | NewsMada
Fampandrosoana ifotony: Indostria isam-paritra manodina ny vokatry ny fambolena
Nitatitra ny fitohizan’ny fandarahanasany ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana, omaly, notarihin’ny minisitra Rakotomalala Lantosoa. Samy manana ny mifanandrify azy ireo sehatra ireo. Fandaharanasa ny amin’ny indostria, ohatra, farafahakeliny ny hisian’izany iray isam-paritra.
Kendrena avy eny ifotony ny fampandrosoana, any amin’ny tontolo ambanivohitra, ka atao indrindra hifandray amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny indostria isam-paritra. Ilana fampiasam-bola ho fanodinana ny vokatra ny eto an-toerana, ohatra, ny voankazo sy ny legioma, mampalaza ny faritra misy azy. “Tokony hizatra izany fanodinam-bokatra eto an-toerana izany isika hampihena ny fanafarana avy any ivelany. Amin’izao fisian’ny valanaretina Coronavirus izao, mandalo fotoan-tsarotra ny fandraharahana, indrindra ny fanafarana entana. Koa tokony hizatra ny hisafidy ny vita lalagasy isika”, hoy ny minisitry ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa.
Misy 10 izao ireo faritra ahitana karazana indostria madinika manodina ny vokatry ny fambolena eny ifotony. Ahitana izany, ohatra, any amin’ny faritra Boeny, Atsimo Atsinanana, Anosy… Atao ny fanohanana ireo indostria tsy miankina mitrandraka ny vokatry ny fambolena ireo, iaraha-miasa amin’ny mpiara-miombona antoka mpamatsy vola. Jerena halain-tahaka amin’izany izay hita fa mahomby any amin’ny firenen-kafa. Sehatra iray hafa nasongadina koa ny fanaovan-damba. Betsaka amin’ireo faritra afakaba eto amintsika no miasa tsy tapaka manodina lamba sy manondrana izany.
Tsy atahorana ny famatsiana PPN
Mifanojo amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 ny fikatsoan’ny toekarena amin’ny ankapobeny. Tsy atahorana anefa ny fampidirana ireo vokatra ilaina andavanandro (PPN) vita avy any Sina, betsaka ampidirina eto. Nanamafy ny ao amin’ny Mica fa tsy ho tapaka ny fampidirana PPN avy any ivelany, toy ny menaka, ny siramamy, ny lafarinina. Tampoka amin’ny firenen-drehetra izao fihanaky Covid-19 izao. Na izany aza, tsy misy fiakarana ny vidim-bary. Misy rahateo ny politika momba ny varotra; teo koa ny Andro iraisam-pirenena momba ny fanjifana mampifandray ny mpamokatra sy ny mpanjifa.